२०७८ जेठ ४ मंगलबार ०३:३७:००
सरकारले जिल्ला–जिल्लामा अक्सिजन पुर्‍याउँछ र नागरिक बचाउँछ भन्नेमा सांसद र स्वयं मन्त्रीलाई नै भरोसा छैन । सिलिन्डर जम्मा गर्ने र जिल्ला–जिल्ला पुर्‍याउन सांसद र मन्त्रीहरूबीच प्रतिस्पर्धा छ । यही वेला, जिल्ला अस्पतालका नाममा छुट्याइएका सिलिन्डर सीधै जिल्ला लग्नुको सट्टा सांसदका घरघर डुलाएर अमूल्य समय पनि बर्बाद गरिएको छ ।
मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले गृहजिल्ला अर्घाखाँचीका लागि १८ सिलिन्डर पठाएका छन्
पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ७९ सिलिन्डरसहित गृहजिल्ला रुकुम पुगे
एमाले सचेतक शान्ता चौधरी २२ चिनियाँ सिलिन्डरसहित गृहजिल्ला दाङ पुगिन्
ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले काठमाडौंबाट गृहजिल्ला अर्घाखाँचीका लागि पठाएका १८ थान अक्सिजन सिलिन्डर गत २९ वैशाखमा नागढुंगा प्रहरीले रोक्यो । अघिल्लो दिन अक्सिजन सकिएर भैरहवाको भीम अस्पताल, बुटवलको धागो कारखानाको आइसोलेसन र नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा १६ जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो । अक्सिजन वितरण अस्तव्यस्त भएको वेला कागजपत्र केही नभएको भन्दै पाँच घन्टासम्म रोकेपछि प्रहरीले अन्तिममा छोड्यो ।
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ । ‘पहिला निमोनिया भएर अक्सिजन लेबल ४० पुगेपछि मात्र बिरामी अस्पताल आउने गर्नुहुन्थ्यो । अहिले समस्या देखियो भने फोन गरी परामर्श गर्ने तथा समयमै अस्पताल आउन थाल्नुभएको छ,’ जिल्ला अस्पतालका डा. गौतमले भने, ‘कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि ६५ जनाको अक्सिजनको सपोर्टमा उपचार गरेर डिस्चार्ज गरेका छौँ । अहिले २५ जनाको अक्सिजनको सपोर्टमा उपचार चलिरहेको छ ।’
सिलिन्डर मात्र नभई दाङको अस्पताललाई बुझाउने भनेर सांसद चौधरीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट औषधिसमेत लिएकी थिइन् । कागजपत्र हेरेपछि प्रहरीले सिलिन्डर छाड्यो । तर, अचम्म ! स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिनियाँ अनुदानमा प्राप्त सिलिन्डर दाङका कुनै पनि अस्पताललाई दिएको छैन ।
माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका पुनले यसअघि रोल्पा नगरपालिकाका साथै सुनीलस्मृति, सुनछहरी र माडी गाउँपालिकाका लागि ५० सिलिन्डर अक्सिजन पठाएका थिए । यद्यपि, ती सामग्री भने स्थानीय तहकै लगानीमा पठाइएको उनको सचिवालय सदस्य जीवन रोका मगरले जानकारी दिए । जिल्लामा स्वास्थ्य सामग्री पठाउँदा काठमाडौंबाट सीधै रोल्पा पठाइएकाले त्यस्तो समस्या नभएको बताइएको छ ।
प्रवासी नेपालीद्वारा मुगु अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा जुम्ला अस्पताललाई हाइड्रोजन अक्सिजन सहयोग